Duqa magaalada Muqdisho oo xilkii ka qaaday afhayeenkii maamulka. – Radio Daljir
Duqa magaalada Muqdisho oo xilkii ka qaaday afhayeenkii maamulka.
Muqdisho, May 13 – Gudoomiyaha gobolka Banaadir ee dowladda KMG ah ee Soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday afhayeenkii maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdilaahi Carriig.
Wareegto uu soo saaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa lagu eedeeyey afhayeenkii maamulka ee gobolka Banaadir inuu shaqadiisii gudan waayay muddo lix bilood ah.
Wareegtada oo saxaafadda uu u aqriyay xoghayaha maamulka gobolka Banaadir Cabdikaafi Hilowle Cusmaan ayaa sidoo kale lagu cadeeyay afhayeenku inuu sidoo kale warar been abuur ah uu ka faafiyay maamulka gobolka Banaadir.
Maxamed Cabdilaahi Carriig, afhayeenka xilka laga qaaday ayaa xilkan soo hayay tan iyo sanadkii 2011-kii, waxaana xilkaan loo magacaabay iyadoo qaraxyo kale duwan lagu dilay saraakiishii dhanka warfaafinta ahaa ee isaga ka horaysay.